कोभिडले बन्द दश रुपैयामा खाना अभियान कात्तिक १ बाट भेरी अस्पतालमा शुरु हुने - Arthapage
कोभिडले बन्द दश रुपैयामा खाना अभियान कात्तिक १ बाट भेरी अस्पतालमा शुरु हुने
प्रकाशित मितिः २७ आश्विन २०७७, मंगलवार ०७:५७ October 13, 2020
नेपालगन्ज २७ असोज : नेपालगन्ज सदरलाइनका ७० वर्षिय नरेश अग्रवालको अगुवाईमा शुरु गरेको दश रुपैयामा खाना अभियान फेरी सन्चालन हुने भएको छ ।
कोभिडका कारण बन्द रहेको उक्त अभियान अब भने सामाजिक दुरी पालना गर्दै भेरी अस्पतालमा शुरु हुन लागेको हो । बालाजीका भक्त अग्रवालले व्यवसायबाट ‘रिटायर्ड’ पछि गत गत कात्र्तिकबाट दश रुपैयामा खाना दिने पुण्य काम गर्दै आएका छन् । तर कोभिडले उनको अभियान रोकिएको थियो ।
अग्रवालका छोरा एवं नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष आदेश अग्रवालका अनुसार भेरी अस्पतालले ठाउँको व्यवस्थापन गरेपछि कात्तिक एक गतेबाट दश रुपैयामा खानाको व्यवस्थापन हुने छ ।
कोभिड भन्दा पहिले नेपालगन्जको नगर भवन अगाडी बालाजीका भक्तहरुले रु १० रुपैयामा खाना दिन शुरु गरेका थिए । १० रुपैयामा सकाहारी मान पेटभरी खान पाईन्छ । दाल, तरकारी, अचार आदि इत्यादी सहित स्वादिष्ट खानाका परिकार हुने गरेको छ ।
यतिबेला रु १० रुपैयामा खाना खानेको भिड नै लागेको छ । बिशेष गरी मजदुरहरु उक्त खाना खानका लागि त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् । कमाएको जति महङ्गो खानामा खर्च गर्न बाध्य मजदुरलाई राहात भएको छ ।
रु १० मा खाना दिन शुरु गरेका मध्ये नरेश कुमार अग्रवालले पुन्य कामका लागि अभियान शुरु गरेको बताए ।
‘यो दश रुपैया पनि नलिने पक्षमा थियौं । तर खाना पकाउने कालिगढलाई दिनुपर्ने भएकाले दश रुपैया दिनुपरेको हो ।’ अग्रवालले भने–‘यसले गर्दा धेरैलाई राहात भएको छ ।’
को हुन अग्रवाल ?
त्यो पनि आजको महङ्गो समयमा ? असम्भव लाग्ने काम सम्भवत गराएका छन्, नेपालगन्ज सदरलाइनका ६९ वर्षिय नरेश अग्रवालले । बालाजीका भक्त अग्रवालले व्यवसायबाट ‘रिटायर्ड’ पछि गत कात्र्तिकबाट दश रुपैयामा खाना दिने पुण्य काम गर्दै आएका छन् ।
नगरभवन अगाडी हप्ताको मंगलवार र शनिवार ‘मेस’ चलाएर रु दशमा खाना बाड्ने गरिन्छ । पाँचसय सम्म सर्वसाधारण खाना खान पुग्छन् । आफुले कमाएको पैसा महङ्गो खानाको जोहो गर्नै मुस्किल पर्नेलाई राहात त दिएको छ नै खानाकोे गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्ने भएका कारण अरु पनि खाना खान पुग्छन् । खानामा भात, दालका साथै मिठाई पनि दिइन्छ ।
६९ वर्षिय अग्रवालल नेपालगञ्जका परिचित व्यवसायी हुन । उनले २०५० सालदेखि रामदूत स्टेशनरी सन्चालन गर्दै आएका थिए । लामो समय व्यवसायमा संलग्न भएका उनले यतिबेला भने ‘रिटायर्ड’ जिवन बिताइरहेका छन् । ‘छोराहरु बिजनेशमा छन् । म अब भने यस्तै पुण्य कामतिर लाग्छु भनेर यो काम शुरु गरेको हुँ ।’– अग्रवालले भने ।
उनका जेठो छोरा आदेश अग्रवालले रामदूत प्रिन्टर्स सन्चालन गरिरहेका छन् । ‘अब केही राम्रो काम गरौं भन्ने लागेपछि मैले छोराहरुसंग सोधे । खर्च कति लाग्छ भनेर छलफल पनि गरे ।’– अग्रवालले भने,–‘छोराहरुले राम्रो काममा साथ दिन्छु भने पछि भोलिलपल्टै काम शुरु गरे ।’
अहिले उनले शुरु गरेको काममा नेपालगन्जका प्रतिष्ठित व्यवसायी सन्जय अग्रवाल, बिजय गुप्ता, रन्जित लखेर, सन्जित ज्वैलर्सले साथ दिएका छन् । ‘अरु साथीहरुले पनि साथ दिएका छन् ।’– अग्रवालले भने,–‘सबैको साथ पाए भने हरेक हप्ता गर्ने योजना रहेको छ ।’ निःशुल्क खाएको छु भन्ने नपरोस् भनेर दश रुपैया शुल् कायम गरेको बताउँदै उनले भने,–‘त्यो पैसा पनि नहुनेलाई सिस्टम नबिग्रियोस् भनेर हामीले दश रुपैया दिएर पनि खाना खुवाएका छौं ।’
अग्रवालले सबैको साथ र सहयोग पाए आगामी दिनमा यसलाई अझै बिस्तार गर्दै लैजाने योजना बनाएका छन् । ‘यो पुन्य काममा सबैको साथ पक्कै रहन्छ ।’– अग्रवालले भने,–‘बाँचुन्जेल यो कामलाई चलाइरहने छु ।’
प्रकाशित मितिः २७ आश्विन २०७७, मंगलवार ०७:५७ |
Prevगलत सूचना शेयर गर्दा गुर्भाकोटमा यसरी चिप्लिए पूर्व सचिव भिम उपाध्याय !
Nextदुई अर्ब ३९ करोडको बिगो माग्दै सुन व्यवसायी बिरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा